Yintoni imidiya yokuncokola? Kutheni le nto iinkampani kufuneka ziKhathalele?
NgoLwesine, Novemba 26, 2015 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Zininzi incoko malunga nefuthe okanye ukungabikho kwempembelelo kwimidiya yoluntu kumashishini e-B2C nakwi-B2B. Ubuninzi bayo bujongelwa phantsi ngenxa yobunzima kwimbonakalo kubahlalutyi, kodwa akukho mathandabuzo okuba abantu basebenzisa iinethiwekhi zokuphanda kwaye bafumane iinkonzo kunye nezisombululo. Awundikholelwa? Ndwendwela u-Facebook ngoku kwaye ukhangele abantu ababuza iingcebiso zentlalo. Ndibabona phantse yonke imihla. Ngapha koko, abathengi banama-71% ngakumbi amathuba okuba bathenge ngokusekwe kwimithombo yeendaba ezithunyelwayo.
Ngokukhula kwemithombo yeendaba kwezentlalo kwishishini kule minyaka imbalwa idlulileyo, imibutho emininzi ye-B2B iyaliqonda ixabiso eliyinyani elinokuyinika. Nokuba usebenzisa imithombo yeendaba kwezentlalo ukunceda ukuthengisa iimveliso ngokuthe ngqo okanye ukuyisebenzisa njengenxalenye yenkqubo yakho yokuvelisa okukhokelayo, ukuthatha indlela ecwangcisiweyo edibanisa ngokupheleleyo imithombo yeendaba zentlalo kwisicwangciso sakho sokuthengisa siyakukunika elona thuba lilungileyo lokuvelisa ishishini elitsha. UStephen Tamlin, ukuSasaza iYurophu
Zeziphi iindlela ezi-4 zeMithombo yeendaba kuLuntu ekufuneka iShishini lakho liPhumeze?
Ukuphulaphula -Ukubeka iliso kwimidiya yoluntu ukuphendula kwithemba kunye nabathengi kwi-Intanethi yindlela engummangaliso yokudala ubudlelwane obuthembekileyo kunye nabo. Ayifanele ibe nomda kubo abathetha ngqo nawe, nokuba. Kuya kufuneka umamele nakuphi na ukukhankanywa kwamagama abasebenzi bakho, iimveliso zakho kunye namagama akho emveliso. Oku kuyakuvumela ukuba uphendule kwimibuzo enxulumene nentengiso, ukhusele igama lakho kwi-Intanethi, kwaye ubangele ukuzithemba ngamathemba akho kunye nabathengi ukuba uyiloluhlobo lwenkampani ebakhathaleleyo kwaye imamele. I-36% yabathengisi ifumene abathengi kwi #Twitter
nokufunda -52% yabanini bamashishini bafumene abathengi kwi #Facebook kwaye i-43% yabanini bamashishini bafumene abathengi kwi #LinkedIn. Ngokujoyina olo luntu, unokumamela iinkokheli zeshishini, abathengi abanokubakho, kunye nabathengi bakho bathethe malunga nokuba yeyiphi imiba ephambili ekwishishini lakho. Oku kuyakunceda inkampani yakho ekuphuhliseni izicwangciso zexesha elide zokukhuphisana kula mashishini.
Ukubandakanyeka -Ukuba uthetha kuphela xa kuthethwa nawe, okanye xa kukho ithuba lokuthengisa- uyaphoswa kukubonelela ngemidiya yoluntu ngombono wokuba uluhlobo luni lwenkampani. Ukugcina umxholo kunye nokwabelana ngenqaku elinomdla kwithemba lakho kunye nabathengi kuya kunceda ukwakha ukuthembana kunye negunya nabo. Ukunceda abathengi bakho baphumelele kuya kuqinisekisa impumelelo yakho, hayi eyabo kuphela!
Ukukhuthaza -Ukhulisa ukufikelela kwakho, inethiwekhi, kunye nokukhuthaza iimveliso kunye neenkonzo zakho ziyimfuneko njengenxalenye yesicwangciso esiliqili seendaba zentlalo. Awusoloko ufuna ukuzinyusa, kodwa akufuneki ushenxise la mathuba kwi-intanethi. Ngaphezulu kwama-40% abathengisi bavale izivumelwano ezibini ukuya kwezintlanu ngenxa yezeMithombo yeendaba
tags: Izibalo zeshishini zosasazo zasekuhlaleni zika-2015amajelo osasazo ezentlaloukuthenga izigqiboUGoogle kunye neshishinigoogle + yeshishiniImidiya yokuncokola inokunceda njani kwishishini lakhoImidiya yokuncokola iyinceda njani ishishinilinkin yeshishiniukuthengisa kuyavalwaabantu abathengisayoimidiya yoluntu kwezoshishinoimpembelelo yemidiya yoluntuukuthengisa kwezentlaloukuthengisa kwezentlaloI-twitter yeshishini
Ihanjiswa njani iWallet eSebenzayo kwiNtengiso yeDrive
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2015 ngo-12: 09 AM
Inqaku elimangalisayo likaDouglas! Ezi ngcebiso ozinikileyo kufuneka zisetyenziswe xa uthengisa ishishini lakho kwi-Intanethi. Ukuthumela akwanelanga. Ukumamela abaphulaphuli bakho kunye nokuzibandakanya nabo kubalulekile ukuze ukwazi ukwazi izinto abanomdla kuzo. Ukuba uyayazi inzala yabo, uya kukwazi ukuchonga abathengi bakho ekujoliswe kubo. Uninzi lwabathengisi baneshishini eliyimpumelelo ngenxa yabathengi abaye babafumana kwimidiya yoluntu. Enkosi ngesi sithuba sinolwazi!
Ngomhla wama-17 ku-Disemba 2015 ngo-1: 37 AM
Ngokuqinisekileyo ziya kuzenza ezi zinto. Ndithetha ukuthi, bendisebenzisa imidiya yoluntu njengenxalenye yephulo lam lokuthengisa kunye nezicwangciso ezichanekileyo zayo, ukuza kuthi ga ngoku, ibisenza kakhulu ishishini. Kodwa andizinciphisi ngoko esi sithuba sakho sinokundinceda kakhulu ukwenza ngcono kolu hlobo lwesicwangciso.